धनुषा महेन्द्रनगरमा एक महिलाको शंकास्पद मृत्यु, परिवारबाट हत्याकाे आशंका, श्रीमान् ,सासु-ससुरा पक्राउ – Shirish News
धनुषा महेन्द्रनगरमा एक महिलाको शंकास्पद मृत्यु, परिवारबाट हत्याकाे आशंका, श्रीमान् ,सासु-ससुरा पक्राउ
महेन्द्रनगर- धनुषामा एक महिलाको शंकास्पद मृत्यु भएको छ । धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका वाडा नं.६ सखुवाबजार स्थित आफनै घरमा सुति रहेका रेणु यादवको मृत्यु भएको हो ।
यादवलाई राति साढे ३ बजे उपचारका लागि जनकपुर अचल अस्पतालमा ल्याएको ५ मिनेटमे मृत्यु भएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ । मृतक रेणु यादवको घाँटीमा निलडाम देखिएको छ । नाक र मुखबाट रगत आएको देखिन्छ भने उनको शरिरमा पराल समेत देखिएको मृतकका वुवा रामविनय यादवले बताएका छन ।
छोरी र ज्वाइँ सुति रहेको बेलामा शनिवार विहान साढे ३ बजे तिर छोरी गम्भिर विरामी भएको फोनमा जानकारी पाएलगतै छोरीको घर धनुषाको सखुवामा आउँदै गर्दा अस्पताल लगिएको खबर पाएर जनकपुर अंचल अस्पतालमा आउँदा छोरीको मृत्यु भई सकेको उनले बताए ।
मृतकका वुवा बर्दिवास नगरपालिका वाडा नं. २ निवासी रामविनय यादवका अनुसार २२ वर्षीय छोरी रेणु यादव र सखुवा महेन्द्रनगर बस्ने विन्दे यादवको २५ वर्षीय छोरा अरविन्द यादवविच २०७० सालमा विवाह भएको थियो । विवाह लगतै विदेश गएका अरविन्द यादव ५ वर्षको विदेश बसाइपछि करिब १ महिना पहिले घर आएका थिए । घर आउनुपूर्व छोरी र ज्वाँइविचमा मनमुटाव रहेको थियो ।
घर आएपछि झगडा मिलाउन माइती पक्ष र ससुरापक्षविचमा १० दिन पहिले करिव २० जनाको उपस्थितीमा छलफल गरि छोरी र ज्वाँइ मिलेर बस्ने भद्र सहमति भएको छलफलमा सहभागि बर्दिवास नगरपालिका वाडा नं.२ बस्ने गोपाल कुमार बरुवालले जानकारी दिएका छन ।
छलफलमा सहमति भएपनि काका ससुरा, काकी सासु ज्वाँइले मोवाइल खोसेका थिए । आज विहान अचानक छोरी विरामी भएको खबर आयो तर हामी अस्पतालमा आउँदा रेणुको मृत्यु भई सकेको थियो । हामीले रेणुको शव हेर्दा उनलाई हत्या गरिएको बरुवालले दावि गरेका छन । घाँटीमा पराल राखेर थिचेर हत्या गरेको माइती पक्षको आरोप रहेको छ ।
मृतक यादवका वुवा रामविनय यादवका अनुसार छोरी रेणु यादवलाइ शारीरिक र मानसिक रुपमा सासु ससुराहरुले यातना दिदै मोवाइल खोसेर राखेका थिए । पटक पटक कुटपिट हुदै आएको थियो । यातना सहेर भएपनि छोरी माइतीमा नआएर श्रीमानको घरमै बसि रहेको थिए । तर सासु, ससुरा र श्रीमानले घाँटीमा पराल राखेर थिचेर हत्या गरेको हामी आंशका गरेका छौ । किनकी ओछयानमा सुति रहेका उनको घाँटीमा परालले थिचेको निलडाम छ । शरिरमा परालको टुक्राहरु रहेको छ । मुख र नाकबाट रगत आएको देखिन्छ त्यसैले छोरीको हत्या भएको वुवा रामविनय यादवले दावि गरेका छन ।
विं.स.२०७० सालमा नगद ९ लाख रुपैया, फर्निचर, सुनलगायत १५ लाख खर्चेर छोरीको विवाह गरेको बताउँदै उनले विवाह लगतै ज्वाइँ विदेश गए छोरी माइती र सासु घर आउँदै जाँदै थिए ।
सासु ससुराले छोरीको आचरणमाथि शंका गरेर फोनमा छोरासंग गफ लगाएपछि रिसाएका ज्वाँइ छोरीसंग फोनमा समेत बोल्न छाडेका थिए । तर सासु ससुराले आरोप लगाएअनुसार छोरीको आचरण गलत नभएको माइतीपक्षले दावि गरेका छन । छोरीको हत्या भएकाले उनलाई कडा भन्दा कडा कारवाही गर्न माग गर्दछु वुवा रामविनय यादवले भने ।
अस्पतालमा भर्नाका लागि ल्याइएको रेणु यादवको मृत्यु भएपछि क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका वाडा नं. ६ स्थित अरविन्द यादव, ससुरा विन्दे यादवलगायतको ससुरापक्षका सवै फरार भएका थिए । फरार भएका अरविन्द यादव, उनका वुवा विन्दे यादव र सासुलाई इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरले पक्राउ गरेका छन । पक्राउ परेका उनीहरुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा अनुसन्धानका लागि ल्याइएको छ ।
मृतकका आमा र दिदी बेहोस
छोरी विरामी भएको खबर सुनेर अस्पतालमा भेटन आएका छोरीको मृत्यु भएको खवरले आमा कुन्ती देवी अचेत भएका छन ।
जनकपुर अंचल अस्पतालको प्राङ्गण छोरीको मृत शरिर हेर्नको लागि विलाप गर्दै गरेकी मृतक रेणु यादवकी ४५ वर्षीय आमा कुन्ती देवी यादव पटक पटक बेहोस हुने गरेकी छिन । उनले छोरीको हत्या भएको दावि गर्दै आएकी छिन । मृतक यादवकी दिदी लिला देवी समेत बहिनीको मृत्युको खबर अर्धचेत अवस्थामा परेकी छिन । बहिनीको शव समेत हेर्न दिएको छैन । हँसिलो र सुन्दर अनुहारकी बहिनीलाई दुश्मनहरुले हत्या गरि दिए अव मलाई कसले दिदी भनेर बोलाउँछ भन्दै बहिनीलाई भेटाइ दिन उपस्थितहरुलाई विलाप गर्दै आएकी छिन ।
प्रहरी के भन्छ घटनाबारे ?
यता, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी निरिक्षक अशोक कुमार झाका अनुसार मृतक रेणु यादवलाई राति ३ बजे तिर अस्पतालमा उपचारका लागि ल्याइएको थियो । रेणुलाई भर्ना गरिएको ५ मिनेट भित्रमै मृत्यु भएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ ।
मृत्यु भएलगतै ससुरा पक्षका मान्छेहरु फरार भएका थिए, फरार भएका उनीहरुलाई इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरका टोलीले पक्राउ गरि जिल्ला प्रहरी कार्यालय ल्याउँदैछ । प्रारम्भिक कुरा बुभmदा टाउको दुख्ने विरामी रहेका रेणुले एकैपटक धेरै औषधी खाएको ससुरा पक्षले दावि गरेका छन । मृतकका माइती पक्षले हत्या भएको दावि गरि रहेका छन ।
प्रहरीले सुक्ष्म तरिकाले अनसुन्धान गरि रहेका छन । शवको पोस्र्टमाटम रिर्पोट आएपछि मात्रै वास्तविकता के हो भन्ने कुरा जानकारी हुने प्रहरी निरिक्षक झाले बताएका छन ।